Lohahevitra otomotika hafa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Other Themes
Ahoana ny fomba hanesorana ny tsiriry poplar any an-trano? Ahoana ny fomba fanasitranana ny tsimok'aretina poplar amin'ny milina?
Raha vantany vao nifarana ny ririnina, miaraka amin'ny olany amin'ny endrika reagents manimba avy eny amin'ny arabe, ary afaka niaina ny mpamily, rehefa nisy olana hafa tsy dia lehibe loatra niseho teo amin'ny faravodilanitra. Ireo dia popla, ...
Asio baoritra, ahoana no hanombohana ny fiara? Ahoana no hanombohana ny fiara raha efa nipetraka ny bateria?
Ny toe-javatra rehefa tsy mandeha ny bateria dia fantatry ny tompona fiara rehetra. Raha ny tokony ho izy dia mitranga amin'ny fotoana tsy mety indrindra izany ary mandrahona amin'ny olana lehibe tokoa. Raha amin'ny toe-javatra an-tanàn-dehibe dia mandrahona ny fahatarana ny famoahana bateria ...
Chevrolet pickups: fandaharana
Na izany aza, ny kamio mpitondra entana no be mpahazo matetika any Etazonia. Ankoatr'izay, Amerika no tanindrazany. Ny tantaran'ny fiara dia natomboka tamin'ny hevitra banal. Ireo mpamorona ny orinasa "Chevrolet" (ny pickup dia nampalaza azy ...
Fiara sarety Lada Kalina sy hatchback: toetra ara-teknika. "Lada Kalina 2" - fiara vaovao
Tamin'ny 2013, AvtoVAZ dia faly tamin'ny mpamily tamin'ny marika vaovao, izay nanatsarana ny toetra ara-teknika rehetra. Lada Kalina 2 dia fiara mitondra kodiarana eo alohan'ny toerana misy toerana ambony sy atitany somary lehibe. ...
Karazana fiara karama ho an'ny 200000 ve? Mividy fiara any Rosia: vidin'ny, toro-hevitra, hevitra
Ka fiara iza no tokony hovidinao 200000 XNUMX? Raha ny marina dia misy safidy maromaro tsy mitombina tsotra izao. Araka ny nolazain'izy ireo - isaky ny tsiro sy ny loko. Alemanina, Japoney, Rosiana, Amerikanina - na inona na inona ...
Ny fanoloana ny fitaovana fantsona VAZ-2114 manamboatra azy io
Ny valizy fanafanana amin'ny fiara VAZ-2114 dia iray amin'ireo teboka malemy indrindra amin'ny rafitra fanamainana. Simba matetika tokoa izany ka ny ankamaroan'ny tompona fiara, rehefa nahazo traikefa, dia nanova azy ho ...
Toeram-piantsonan'ny bisikileta homemade. Ny bisikileta dia manao izany
Ny famolavolana môtô sy motera diesel dia noforonina saika niaraka tamin'izay. Na izany aza, ireo fitaovana ireo dia nandalo lalan'ny fivoarana samihafa. Vitsy no afaka nieritreritra fa indray andro any mety hahomby ireo endrika ireo ...
Inona no atao hoe fiaramanidina (fiara)? SUVs sy crossovers
Ny SUV sy ny crossovers dia fiara manana fahaiza-manao lehibe. Na amin'ny tanàna na amin'ny ivelan'ny tanàna, dia namanao azo antoka izy ireo. Inona no atao hoe crossover (fiara) Crossovers vaovao ...
JCB 3CX Super Loader Mpanjifa: teknikan'ny teknikam-pampianarana, torolàlana fampianarana
Ny orinasa britanika jbb dia fantatra erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanamboaran-tsarimihetsika avo lenta sy mifehy. Backhoe loaders dia mitana toerana manokana ao amin'ny orinasa isan-karazany. Iray amin'ireo maodely malaza indrindra amin'ity teknika ity ...
"Lada 2170" ("Priora"): famaritana, hevitra
Lada Priora-2170 dia fiara novokarin'i AvtoVAZ voalohany tamin'ny 2007 ho toy ny sedan. Taty aoriana, tamin'ny 2008, dia namokatra famokarana be ny hatchback, ary tamin'ny 2009, ny sarety fiantsonan'ny gara. Marihina fa ...
KAMAZ-65115: fepetra teknika, famaritana sary, sary
KamAZ-65115, ireo toetra ara-teknika izay haseho etsy ambany, dia novokarina nanomboka tamin'ny 1995. Namidy ny kamiaobe tamin'ny taona 1998. kamiao fitambarana andian-dahatsoratra izay fenoina sy alaina avy any aoriana ...
Fa maninona ny sarimihetsika vinyl adhesive amin'ny fiara? Ahoana ny fomba fametahana ny sarimihetsika amin'ny fiara. Ny orinasa hividy sarimihetsika vinyl
Androany, ny fanaingoana ny fiara dia atao amin'ny fomba isan-karazany. Na izany aza, ny malaza indrindra dia ny manamboatra fiara amin'ny sarimihetsika vinyl. Ity fitaovana ity dia azo alaina amin'ny mpanamboatra maro. Goavam-be tokoa ilay karazany, ka misafidy izay mety ...
Patron Taker 250: lahatsary, mari-pamantarana, sary, haingana be
Ilay moto Patron Taker 250 dia manana endrika misoloky. Rehefa jerena ny maso dia misy mahatsapa fa maodely efa ela an'ny "Japoney" sasany izany. Na ny matihanina na ny mpankafy ny moto dia samy hilaza avy hatrany hoe ...
Mila manala ny motera aho rehefa manova ny solika: fanehoan-kevitra matihanina
Mila kosehina ve ny motera rehefa manova menaka? Amin'ny autoforum marobe dia ahitanao adihevitra mafana momba an'ity olana ity. Ny mpanohana ny fomba fijery roa dia matoky ny zato isan-jato fa marina ny azy ireo, mitanisa ny karazan-karazan ...
Sedan "Lada Granta": fanamarihana sy hevitra momba ny tompony
"Lada Granta" (sedan) no anaran'ny fiara fitaterana kodiarana anoloana, izay novolavolain'ny Volga Automobile Plant. Ny maodely Lada Kalina dia nalaina ho fototra. Nanomboka ny taona 2011 ny famokarana serial, ary ny ...
Volon'ny solika: fialofana, fifantenana, fitehirizana
Izay mpitondra môtô, ary vao mainka vao manomboka, dia liana amin'ilay fanontaniana hoe menaka motera inona no safidiny ho an'ny fiarany, ny fiainany talantalana, ny firafiny ary ireo tondro hafa. Nambaran'izy ireo fa amin'ny fiafaran'ny fiainany fanompoana, toa ny ...
Nahoana no misy mandondòna rehefa mamadika ny kodiarana ho eo ankavanana, havia?
Amin'ny dingana voalohany amin'ny fananana fiara manokana, ny tompona dia mifantoka amin'ny toe-javatra amin'ny làlana. Rehefa mandeha ny fotoana dia tonga ny fahatakarana ny fiasa sasany amin'ny fiaranao. Nanjary azo atao ny mamantatra ny tena vokatry ny fiara (niseho ...
Ny lanjan'ny fiaran'ny fiara dia ny lanjan'ny lanjany
Eo amin'ny sehatry ny fiara sy ny zava-drehetra mifandraika amin'izy ireo, misy hevitra roa toy ny lanjan'ny fiara sy ny lanjan'akanjo. Ireo dia toetra roa resahina matetika ao amin'ny kilasy teôria.
Ny bokotra power VAZ-2110 dia tsy miasa
Raha mijanona tsy mandeha ny bokotra mpandrindra ny varavarankely, dia mety hivadika nofy ratsy ny mitondra fiara. Varavarankely misokatra amin'ny ririnina mangatsiaka na mihidy amin'ny hafanan'ny fahavaratra - mazava izany ...
Chevrolet-Niva, sivana kabine: fanoloana. Chevrolet Niva novokarin'i GM-AvtoVAZ
Ny fiara Niva Chevrolet dia iray amin'ireo maodely voalohany novokarin'i AvtoVAZ, izay nametrahana sivana kabine avy tao amin'ny orinasa. Ity singa ity dia mitana andraikitra lehibe. Momba ny firafiny, ny karazany ary ny fanoloana azy - bebe kokoa ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 68 Next Page
72 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 5,836.